Weeraro Kala Duwan Oo Ka Dhacay Konfurta Dalka Somalia. – Calamada.com
Weeraro Kala Duwan Oo Ka Dhacay Konfurta Dalka Somalia.
calamada August 23, 2019 2 min read
Ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin waxey Saacadihii lasoo dhaafay Weeraro kala duwan ka kala fuliyeen qeybo ka mid ah Wilaayaatka Banaadir, Jubbooyinka, Gedo, Baay iyo Shabeelada hoose.
Weerarka hore oo dil qorsheysan ah waxey ciidamada Mujaahidiinta ka fuliyeen gudaha degmada Yaaqshiid gaar ahaan Xaafadda Towfiiq waxeyna ku dileen askari ka tirsan Dowladda Ridada Federaalka kaasi oo ay ka furteen kana Ganiimeysteen Qorigii uu ku hubeysnaay.
Howlgalka Labaad oo ah Qaraxyo waxey ciidamada Mujaahidiinta si gooni gooni ah ula beegsadeen gaadiid ay la socdeen Saraakiil American ah iyo Saraakiil ka tirsan Maamulka Ashahaado la dirirka isku magacaabay Jubbo land.
Qaraxa lala beegsaday Saraakiisha Saliibiyiinta Mareykanka ayaa sababay khasaara kala duwan oo soo gaartay American-ka, Iyadoona Qaraxa lala beegsaday Saraakiisha Jubbo land uu sababay dhimashada Labo Sarkaal oo mid ka mid ah lagu magacaabo Bashiir Goobe kaasi oo ahaa Taliye Hurin.
Isla Duleedka Kismaayo ayaa Kamiin loogu dhigay Maleeshiyaatka kale oo ka tirsan Maamulka Murtad Axmed Madoobe waxeyna Ciidamada Mujaahidiinta Garneelada Garbaha laga rido la heleen gaari Cabdi Bile ah taasi oo sababtay khasaara Naf iyo Maal ah oo soo gaartay Ashahaado la dirirka Jubbo Land.
Dhanka Wilaayada Baay iyo Bakool waxey Ciidamada Mujaahidiinta weerar qorsheysan ku qaadeen saldhig maleeshiyaatka Murtadiinta ay ka sameysteen Degmada Qansaxdheere waxeyna Weerarkaasi ku dhaawaceen Hal askari oo ka tirsan Ashahaado la dirirka isku magacaabay Konfur Galbeed.
Dhanka Wilaayada Shabeelada Hoose Waxey Ciidamada Mujaahidiinta Labo Qarax la beegsadeen Maleeshiyaat ka tirsan Kooxda Ridada Somalia kuwaasi oo Lugeynayay Wadada isku xirta Degmada Wallanweyn iyo Deegaanka Warmaxan taasi oo sababtay khasaara soo gaartay Murtadiinta.
Dhanka Wilaayada Gedo waxey Ciidamada Mujaahidiinta Weerar culus ku qaadeen Xero Maleeshiyaatka Murtadiinta ay ka sameysteen Degmada Baardheere, Dab xoogan ayaana ka kacay Gudaha Xerada kadib markii ciidamada Mujaahidiinta ay Garneelada Garbaha laga rido la heleen Teendhooyin Murtadiinta ay ka dhisteen gudaha Xeradaasi.
Previous: Halkan Ka Dhageyso Warka Duhurnimo-22-12-1440 Hijri.
Next: Halkan Ka Dhageyso Warka Subaxnimo 23-12-1440 Hijri.